Nbudata TDS Boeing 787-800 RR Mega FSX & P3D - Rikoooo
downloads 178 561
Tenkuu Developers Studio, nke Ricardo_tv na Chris Evans deziri. Nchịkọta 787 2d site G Munro. VC gbanwere site na Alejandro Rojas Lucena. Gbanwee, idozi na mmelite site na Rikoooo
Nanị! Boeing 787 Ezinụlọ Mega-mkpọ na 82 repaints, ikekwe ngwugwu freeware kacha mma n'ụwa maka FSX na P3D. Gụnyere ezinụlọ Boeing 787 dum nke usoro isii (787-800RR na GEnx, 787-900RR na GEnx, 787-10RR na GEnx).
Ihe ngwugwu a gụnyere nsụgharị abụọ. Versiondị nke nwere naanị otu 2D nke bụ otu nke ezigbo Boeing 787 nke G Munro mepụtara ma ọ bụ ụdị ọzọ nwere ọnụọgụ cockpit / 2D nke bụ ụdị ndabara nke B737 nke FSX mana ọ dị mma ma dabaa na Boeing 787 (ụdị ọhụụ, ọfụma ọhụrụ wdg) Ọ dịịrị gị, mee nhọrọ gị. Ma nsụgharị abụọ ahụ enweghị atụ. Rịba ama na enwebeghị ụdị 3D nke 787 kobere anya mmiri na ụdị freeware.
Ejikọtara ya na nsụgharị niile: FMC na-arụ ọrụ, GPWS, 787 GPS ọhụụ, ihe ngosi ala, ụda omenala dabere na ụdị RR ma ọ bụ ụdị GEnx, Pushback, V-Speed ​​na ndị ọzọ. Gụnyere ederede dị elu na nkọwa zuru oke. 100% dakọtara na Prepar3D v4 na FSX-Akpali edemede.
Boeing 787, nke aha ya bụ Dreamliner makwaara, bụ ụgbọelu ogologo oge. Emere ulo oru na April 26, 2004 maka inye oru na May 2008, o na-eme njem mbu ya na December 15, 2009 ma kwenye na August 26, 2011. Ihe mbu nke mbu mere na September 26, 2011 na All Nippon Airways.
Ụgbọ elu a na-ebu n'etiti ndị 210 na 330 njem na-adabere na nsụgharị na nhazi, ọ dịkwa mma nke ọma: dị ka Boeing si kọwaa ya, ihe oriri mmanụ bụ 20% ala karịa nke Airbus A330 ma ọ bụ Boeing 777. (Wikipedia)
Ndepụta nke imeju:
Ọdụ ụgbọ elu Japan (JAL)
Ụgbọ ala ụgbọ
Ụgbọ elu Canada
Ọnụgụ ọnụọgụ abụọ
Boeing Rollout Agba
Ụgbọ njem Latam
Ụgbọ njem Scoot
Azerbaijan ụgbọ elu
Orbit ụgbọ elu
Nsiokwu 1: 2D panel 787:
2 Version: Melpit dị elu / 2D panel:
Onye edemede: Tenkuu Developers Studio, nke Ricardo_tv na Chris Evans deziri. Nchịkọta 787 2d site G Munro. VC gbanwere site na Alejandro Rojas Lucena. Gbanwee, idozi na mmelite site na Rikoooo